Umatshini wokuvala izixhobo, abaxhasi - China Isivalo somenzi abavelisi
Inkonzo yokuxhasa zonke iintlobo zokubopha
I-Fastener ligama eliqhelekileyo lohlobo lwamalungu asetyenzisiweyo ukukhawulezisa nokudibanisa iinxalenye ezimbini okanye ezingaphezulu (okanye izinto) ngokupheleleyo. Ikwabizwa ngokuba ngamalungu asemarike. Ihlala iquka ezi ntlobo zili-12 zilandelayo: Iibholiti, izikhonkwane, izikrufu, amandongomane, izikrufu, izikrufu zomthi, iwasha, amakhonkco okugcina, izikhonkwane, iirivethi, iindibano kunye nokudibanisa izibini, izikhonkwane zentsimbi. (1) Bolt: luhlobo lokuvala oluqulathwe yintloko kunye nescrew (isilinda ngentambo yangaphandle), efuna ukuhambelana ...
Inkonzo ye-OEM ODM yokulungisa ulwenziwo
I-Bolt eqhagamshela kulwakhiwo lwesinyithi yindlela yoqhagamshelo edibanisa ngaphezulu kweendawo ezimbini zesakhiwo sentsimbi okanye izinto zento enye ngeebholithi. Unxibelelwano lweBolt yeyona ndlela ilula yoqhagamshelo kwicandelo langaphambi kwendibano kunye nofakelo lolwakhiwo. Ukudityaniswa kweBolled yeyona nto isetyenzisiweyo kufakelo lwesinyithi. Ngasekupheleni kweminyaka yee-1930, uqhagamshelo lwe-bolt lwatshintshwa ngokuthe ngcembe luqhagamshelo lwe-rivet, olwalusetyenziswa kuphela njengenyathelo lokulungisa okwethutyana kwindibano yecandelo. Amandla ombane aphezulu axhuma ...
Lonke uthotho ngokwezifiso Screw
Inqanaba lokusebenza kwe-bolt liqulathe iinxalenye ezimbini zamanani, ezimele ngokulandelelana ukomelela kwe-bolt kunye nomyinge wemveliso yezixhobo. Umzekelo, intsingiselo yeebholithi ezinenqanaba lokusebenza kwe4. mm2; Inani kwinxalenye yesibini (6 ngo-4.6) lizihlandlo ezili-10 zomyinge wesivuno sezinto zebhawudi, okt FY / Fu = 0.6; Imveliso ...
Inkonzo yokumisa enye yokubopha
Imisonto isetyenziswa ngokubanzi, ukusuka kwinqwelomoya nakwiinqwelo-mafutha ukuya kwimibhobho yamanzi nakwirhasi esetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla. Ngamaxesha amaninzi, imicu emininzi idlala indima yokuqinisa unxibelelwano, kulandele ukuhanjiswa kwamandla nokunyakaza. Kukho eminye imisonto yeenjongo ezizodwa. Nangona kukho iintlobo ezininzi, inani labo lilinganiselwe. Ukusetyenziswa okuhlala ixesha elide komsonto kungenxa yesakhiwo sayo esilula, intsebenzo ethembekileyo, ukuhlengahlengisa okulula kunye nokwenza lula, okwenza ukuba ibaluleke kakhulu kulwakhiwo ...
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Izikrufu, Plate Intwasahlobo, Izahlulo Ihowuliseyili, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Ukulahlwa kweMagnesium, Zonke iiMveliso